UKhoza udinwe uyaveva ngo-Ertugral | News24
UKhoza udinwe uyaveva ngo-Ertugral
Durban - Udinwe uyaveva u-Irvin "Iron Duke" Khoza onguSihlalo we-Orlando Pirates ngalokho akubiza ngokuhlanjalazwa emphakathini nguMuhsin Ertugral obecija le kilabhu okulindeleke ukuba ibanjwe okwesikhashana ngu-Augusto "Njenje" Palacios, kubika iphephandaba ILANGA.
U-Ertugral uthelwe ngehlazo yiSuperSport United kuba ngu-6-1 kowe-Absa Premiership ngoLwesibili ebusuku eMbombela Stadium, maqede wamemezela kumabonakude ukuthi uphonsa ithawula kumaBhakabhaka. Utshele abezindaba emuva kwalo mdlalo ukuthi uzoxhumana noKhoza ukumazisa ukuthi uyasula emsebenzini ngenxa yokuhlonipha ibheji lale kilabhu.
UKhoza ubize abezindaba izolo ngoLwesithathu emini eGoli lapho echaze khona ukusuka nokuhlala ngesimo salo mqeqeshi nesekilabhu imbala.
"Ngabo-3 entathakusa umqeqeshi ungithumelele i-email engazisa ukuthi uyesula emsebenzini. Ngiphoxekile ngesenzo sakhe ngoba umemezele kumabonakude. Bengilindele ukuthi anginike ithuba kuqala, angichazele njengomuntu omnike ithuba. Ngiyakwamukela ukwesula kwakhe, ngimufisela inhlanhla.
"Nokho ngeke ngimuyeke nje kalula kanjalo. Ngisazohlalela inkontileka yakhe ngiyifunde ukuze ngibone ukuthi akaphulanga mthetho yini kuyona. Njengamanje sisazobheka ngaphakathi ekilabhini ukuthi ngubani ozoqhubeka nezintambo kuze kube nguZibandlela (December). Ngizocela uPalacios ukuba abambe okwesikhashana, ngethemba ukuthi uzovuma.
OLUNYE UDABA: UBenni uthi kukhona okushaya amanzi kwiPirates
"Ozovuma ukubamba izintambo nguyena ozonquma ukuthi uyabahlalisa yini ebhentshini uBradley Carnel obengumsizi womqeqeshi noRowen Fernandez. Inkontileka ka-Elsa Storm obesethimbeni labaqeqeshi ibithi uma kuhamba u-Ertugral naye uyahamba.
"Kodwa-ke simubhalele incwadi ukumubuza ukuthi uzomisa kanjani. Ngiphoxekile ngokwenziwe ngu-Ertugral, ngeke ngikufihle lokho ngoba bekusenodaba lwakhe no-Edwin Gyimah obekusafanele silulungise oluzosala lulenga," kusho uKhoza.
Uqhube ngokuthi nabadlali ngokunjalo kusazofanele bamunike incazelo ngokwenzekile.
"Abalandeli bangangifakazela ukuthi sithenge abadlali abaseqophelweni eliphezulu. Umqeqeshi wethu ubengenankinga ngalapho. Kodwa-ke okwenzekile sekwenzekile impilo kufanele iqhubeke. Ngisazohlangana nabadlali bangichazele ukuthi kwenzakaleni kulo mdlalo, kangifune muntu ozovika ngesimo sezulu ngoba womabili amakilabhu abedlala kusona.
"Sigcine ukuphoxeka ngalolu hlobo ngowezi-1990 sihlulwa ngalolu hlobo (yiMamelodi Sundowns). U-Ertugral ube yivaka. NoGordon Igesund esangumqeqeshi wethu wayefuna ukusula kodwa ngahlala naye phansi waqhubeka nomsebenzi wagcina enqobe isicoco seligi, waba yiqhawe. Kwazi bani ukuthi bekuzogcina kwenzakaleni ngokuphela kwesini," kubuza uKhoza.